पश्चिमको ‘आर्थिक राजधानी’लाई फेरी लकडाउनको चोट, तंग्रिने खुसी हरायो ! - Arthapage
पश्चिमको ‘आर्थिक राजधानी’लाई फेरी लकडाउनको चोट, तंग्रिने खुसी हरायो !
प्रकाशित मितिः २१ श्रावण २०७७, बुधबार ०८:३० August 5, 2020
बाँके २१ साउन : साउन १५ गते । बाँकेका तारे होटलमा सन्चालनको खुसि थियो । चार महिनाको लकडाउनमा बन्द रहेका होटलहरु आंशिकरुपमै भए पनि चल्ने तरखरमा थिए । सीमित कर्मचारीहरु हेल्थ प्रोटोकल अपनाएर बिहानैदेखि सेवाग्राहीको स्वागत गर्न बसेका थिए । तर सेवाग्राहीलाई स्वागत गर्ने त्यो खुसी एकदिन पनि टिक्न सकेन ।
कोरोना संक्रमितको संख्या ह्वात्तै बढ्ेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले निषेधाज्ञा लागु गर्यो । जुन आगामी शनिवारसम्म जारी छ । आशिंकरुपमा भए पनि होटल चलाउने योजना भताभुङ्ग भयो ।
होटल जस्तै अवस्था उद्योगी,व्यवसायीको पनि छ । लकडाउन अन्त्यसंगै पश्चिमको आर्थिक राजधानीका उद्योग पहिले जस्तै चल्ने अपेक्षा गरिएको थियो । चाडपर्व नजिकिएका बेला अन्य व्यापार पनि तंग्रिने आशा पलाएको थियो । तर यि आशा निरासामा परिणत भएको छ । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अब्दुल वाहिद मन्सुरी भन्छन्–‘अवस्था सामान्य होला भनेको झन् समस्याग्रस्त भयो ।’
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्र पूर्णतः लकडाउनको अवस्थामा छन् । व्यवसायिक हिसावले लाइफलाईन मानिएका क्षेत्रहरु नै लकडाउनमा परेपछि त्यसको प्रभाव अन्यत्र पर्नु स्वाभाविक हो । लकडाउनकै बीचमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले निकालेको मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) २.३ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । अन्य अनुसन्धानहरुले आर्थिक बृद्धि अझ खुम्चिने आंकलनहरु गरिरहेका छन्
लकडाउन अन्त्यसँगै अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरुमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ ।
नीजि तथा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुनुका साथै ठूला साना सबै प्रकारका व्यवशायहरु क्रमशः खुल्न थालेका थिए । रेस्टुरेन्टहरु खोलिएका मात्रै थिएनन्, भरिभराउ हुने अवस्थामा पुगेका छन् । मोटरासाईकल बिक्री पुरानै अवस्थामा फर्किने चरणमा छ भने चार पाङग्रे सवारीसाधनको सोधपुछ बढ्दै गएको छ ।
सिमेन्ट, छडदेखी, मदिरा, मोबाईल, कम्प्यूटर, कपडा सबै बस्तुको व्यापार करीव पुरानै अवस्थामा फर्किएको आभास मिल्दै थियो । यसबीचमा कतिपय बस्तुहरुको अभाव महसुस समेत भएको छ । त्यसको असर बस्तु आयातमा परेको छ । आयात पुरानै अवस्थामा पुगेको छ । लकडाउन खुलेसँगै दैनिक ५र ६ अर्ब रुपैयाँ बस्तु आयात हुन थालेको छ । लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएपछि ठेकेदारहरु पुनः म्याद थपेर काम अघि बढाउन खोजिएको छ ।
बरु अत्यन्तै कठिन क्षेत्रहरुमा लकडाउन गर्ने र मानिसहरुलाई सुरक्षा मापदन्ड अपनाएर मात्र बाहिर निस्कन, अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन र कोरोना भाईरसको चेकजाँचलाई बढाउन, भारतीय सीमाबाट अनियन्त्रित ढंगले भईरहेको आवागमलाई पूर्ण रुपले रोक्न विशेष कदम चाल्नुपर्ने मत छ ।
मृत अवस्थामा पुग्न लागेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो र सरकारले नै जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले लकडाउन गरेर विस्तारै अघि बढ्न खोजेको अर्थतन्त्रको बीचैमा घाँटी निमोठ्ने प्रयास गर्नुभन्दा अरु नै विधि प्रयोग गरेर रोगको उपचार खोजिनुपर्छ ।
यसअघि भएको ४ महिना लामो बन्दाबन्दीले देखाईसकेको छ कि लकडाउन मात्रै असली उपचार होइन । केही अवधि भाईरसको कहर नदेखिए पनि अन्ततः यसको आयाम विस्तार भएरै छाड्यो । अहिले नै पनि धेरै व्यक्तिहरु वेरोजगार भईसकेका छन् । कतिपय साना तथा मझौला उद्यम/व्यवसायहरु उठ्नै नसक्ने गरि थलिएका छन् ।
प्रकाशित मितिः २१ श्रावण २०७७, बुधबार ०८:३० |
Prevसार्वजनिक टिकाटिप्पणीले नरैनापुरका जनप्रतिनिधिको चित्त दुख्यो !
Nextगुर्भाकोटदेखि चौर पुग्यो गाडी, तरकारी र फलफुल किन्न घरमै पुग्छन् व्यवसायी